के बिहानको साढे दुई बजे उठ्नु सफलताको राज ? | Ratopati
के बिहानको साढे दुई बजे उठ्नु सफलताको राज ?
ब्रायन लुफकिन /बीबीसी
हलिउड स्टार एवं दुईपटक ओस्कर पुरस्कारका लागि नमाङ्कित मार्क वालबर्गले आफू राती साढे दुई बजे उठ्ने खुलासा केही हप्ता अघि गरेका थिए ।
जब हामी मस्त निन्द्रामा हुन्छौं त्यतिबेला वालबर्ग जिममा कसरत गरिरहेका हुन्छन् । उनी जिममा ९० मिनेट बिताउने गर्छन्, त्यसपछि गोल्फ खेल्छन् र प्रार्थना गर्छन् । वालबर्ग बेलुका साढे सात बजे नै सुत्छन् ।
चाँडै उठ्नेहरुमा वालबर्ग एक्ला व्यक्ति होइनन् । एप्पलका सिइओ टिम कुक बिहान पौने चारबजे उठ्छन् । डिज्नीका मालिक बब आइगर बिहान चार बजेर २५ मिनेटमा वर्कआउट सुरु गर्छन् ।
अमेरिकामा एनबीए खेलाडी पनि बिहान निकै चाँडै जीममा पुग्ने गर्छन् ।
कर्पोरेट जगतका सफल मानिसहरुको प्रोफाइलमा एउटा कुरा मेल खान्छ, सफल हुन चाहनुहुन्छ भने सबेरै उठ्नुहोस् ।
के हामी सबै चाँडै उठ्नुपर्छ ? के यसो गर्दा हामीले धेरै काम गर्न सक्छौं ?
एप्पलका सिइओ टिम कुक
बिहान साढे दुई बजे दिनको सुरुवात गर्नुको अर्थ हो निकै लामो दिन र आराम शुन्य बराबर । तर वालबर्गको सुत्ने समय हेर्दा यस्तो लाग्छ कि उनी हरेक दिन सात घण्टा सुत्छन् ।
काम गर्नका लागि यो आवश्यक छ । निन्द्रासँग सम्झौता भए स्वास्थ्य बिग्रने गर्छ । दिमाग पनि सही ढङ्गले चल्दैन ।
सुत्ने र उठ्ने समयको आधारमा शोधकर्ताले मानिसहरुलाई दुई समूहमा बाँडेका छन् ।
चाँडै सुत्ने र चाँडै उठ्नेलाई स्काइलार्क (एक प्रकारको पंक्षी) भनिएको छ भने ढिला सुत्ने र ढिला उठ्नेलाई उल्लुको संज्ञा दिइएको छ ।
बान्सका अनुसार बाल्यकालमा लगभग सबै व्यक्ति स्काइलार्कजस्तै हुन्छन् । उनीहरु चाँडै सुत्छन् र चाँडै उठ्छन् ।
तर प्रश्न यो उठ्छ कि बिहान चाँडै उठेर तपाईं के हाँसिल गर्न चाहनुहुन्छ ? के तपाईं मानिसहरुलाई प्रभावित गर्न मात्र यस्तो गरिरहनुभएको छ ?
यदि तपाईं सुन्न सक्नुहुन्छ भने आफ्नो शरिर भित्रको आवाज सुन्नुहोस् । यो बुझ्नुहोस् कि तपाईंको शरिरलाई कहिले आरामको आवश्यकता छ ।
कारण चाहे जे सुकै होस्, तपाईंको स्वास्थ्य सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । बार्न्सको शोधले देखाएको छ कि जबर्जस्ती उठ्नु र शरिरलाई काममा लगाउनु अनैतिक हो ।
बार्न्स भन्छन्, ‘यदि तपाईंलाई कुनै काम गर्न मन लागिरहेको छैन भने तपाईंले गल्ती गर्नुहुनेछ ।’ यस्तो स्थितीबाट बच्न अत्यावश्यक छ ।